Sarinà fampirantiana indroa matory an'i Enomoto | Famoronana an-tserasera
Issui Enomoto dia mpaka sary Japoney monina any Yokohama, Japon, tanàna seranan-tsambo atsimon'i Tokyo. Mpamily taxi izy amin'ny alina mba hitady endrika fidiram-bola isam-bolana, tahaka ny zava-mitranga amin'ireo mpanakanto an'arivony eraky ny planeta izay mitady fomba hitohizany tena manoloana tontolo iray somary sarotra toa ny tontolo mamorona.
Ny taxi anao dia miasa ho studio anao manokana izay Makà fotoana vitsivitsy amin'ireo araben'i Tokyo ireo eo am-pitadiavana mpandeha. Ny fiparitahany indroa tao amin'ny sariny dia nahatonga azy ireo ho karazana nofinofy izay ny tanàna, ny jiro ary ny asfalta no tontolo iainan'ireo mpandeha an-tongotra izay mandalo toy ny aloka indraindray.
Enomoto mamaritra ny fiarakaretsany ho karazana «sambo mpisitrika kely» amin'ny "ranomasina lehibe" amin'ny tanànan'ny seranan-tsambo. Manohy ny asany zavakanto izy amin'ny fikarohana ireo sary mampiseho ny alina sy ireo zoro izay toa misy ny zava-drehetra.
Mifandraika ny sary fampirantiany indroa izany hetsika tsy manam-petra an'ny olona mirongatra izany, tsy fantatra anarana, ny araben'ilay tanàna lehibe. Mampita amin'ny mpijery izany rivo-piainana izany ary saika ny fandotoana izay mipoitra ankehitriny amin'ny iray amin'ireo habeny ireo.
Maro amin'ireo mpihetsiketsika amin'ny sariny miseho miady amin'ny herin'ny orana na ny rivotra, na mbola eo alohan'io zotram-pifamoivoizana mena io izay manjaka amin'izy ireo rehefa tena ilaina ny fifamoivoizana amin'ny fitondran-tena tsara an'ny olom-pirenena rehetra.
La mampalahelo ny fisarahana amin'ireo olona ireo ary ny alahelo izay mipoitra isaky ny sary tsirairay avy indraindray dia mahatonga anay handalo ny fahitan'ity mpaka sary ity izay amin'ny alina mandeha miaraka amin'ny fakan-tsariny mitady ny zanak'olombelona mandalo eo alohan'ilay jiro amin'ireo jiron'ny fiaran'ny fiarany.
Facebook-nao y ny tranonkalanao for mitaingina ny sambo mpisitrika manokana.
Raha te hanohy ny dia amin'ny arabe ao Tokyo ianao, wakui.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » sary » Ny sary fampirantiana indroa an'ity mpamily taxi japoney ity